February 2017 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
cusmaan	 Feb 28, 2017 0
Dhuuxa wareysiyada waa barnaamij mug weyn leh oo habeen walba ka baxa war baahinta islaamiga ah ee Al-furqaan, waxaa lagu soo qaataa wararkii u dambeeyay iyo wareysiyo muhiim ah oo dhinacyo kala duwan lala yeesho. Halkan Ka Dhageyso…
Axmad	 Feb 28, 2017 0
Barqinimadii maanta ayaa Qarax xoogan wuxuu ka dhacay degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho, kaas oo lala beegsaday mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ee dowladda Farmaajo. Qarax ayaa sababay inuu geeriyoodo C/raxmaan Afleershe…
Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weeraro kala duwan waxay habeenkii xalay ka fuliyeen magaalooyinka Gaalkacayo iyo gobolka Mudug, weeraradaas oo lagu beegsaday ciidamo iyo Saraakiil katirsan maamulka Puntland. Dhanka…
Si aad u hesho wararkii u dambeeyay, dhageyso warka subaxnimo ee warbaahinta islaamiga Al-furqaan.
cusmaan	 Feb 27, 2017 0
Dhuuxa wareysiyada waa barnaamij mug weyn leh oo habeen walba ka baxa war baahinta islaamiga ah ee Al-furqaan, waxaa lagu soo qaataa wararkii u dambeeyay iyo wareysiyo muhim ah oo dhinacyo kala duwan lala yeesho.
Axmad	 Feb 27, 2017 0
Si aad u hesho dhacdooyinkii ugu dambeeyay dalka iyo dibadd, la soco wararka ka baxa Idaacadda Al-Furqaan. Halkan ka dhagayso War Duhur 27 02 2017
Wararka ka imaanaya dalka Baxreyn ayaa tibaaxaya in maalintii shalay oo Axad ahayd ay la kulmeen ciidamo katirsan Booliiska dalkaas weerar qarax ahaa, kaas oo sida muuqatay lagu aasey hareerta wadada laamiga ah. Ciidamada la weeraray…
Si aad u hesho xaqiiqda dhabta ah ee ka taagan dalka iyo dibadda, dhagayso wararka kabax Idaacadda Alfurqaan. Halkan ka dhagayso War Subax 27 02 2017.lite
Magaalada Muqdisho waxaa si aad ah looga arkayaa holac iyo qiiiq ballaaran oo ka baxaya Suuqa ugu weyn Soomaaliya oo ah Suuqa bakaaraha, kadib markii uu dab xoogan qabsaday qeybo kamid ah Suuqa. Dabkan oo aan la ogeyn illaa iyo hadda…